Zorin OS 15 Lite yave kuwanikwa nerutsigiro rweSpap uye Flatpak | Linux Vakapindwa muropa
Kwekupedzisira Chikumi, Zorin yakaburitsa vhezheni nyowani yesisitimu yayo yekushandisa. Yakanga iri pamusoro Zorin OS 15, yazvino chiverengero cheiyo inoshanda sisitimu iyo yakagadzirirwa nevashandisi avo vanoshandiswa kushandisa Windows mupfungwa. Anenge mwedzi mina gare gare, iyo kambani yakaburitsa yakafanana update yeayo Dzidzo vhezheni uye nhasi, mwedzi miviri mushure meiyo dzidzo vhezheni, iyo kambani akakanda Zorin OS 15 Lite.
Zorin OS inowanikwa mune mana sarudzo dzakasiyana, chete ndiyo yakazara vhezheni inonzi Yekupedzisira kubhadharwa. Kana isu tisingade rutsigiro ruzere, uye kana tisingade iyo yakakosha vhezheni (Core) kana iyo yekudzidzisa, izvo zvavakaunza nhasi ndiyo inonakidza sarudzo kune vakawanda vashandisi. Kubva paUbuntu 18.04, Zorin OS 15 Lite yasvika nezvakakurumbira zvitsva zveZorin OS 15. Une iyo inonakidza kwazvo mushure mekucheka.
Zorin OS 15 Lite inoonekera
Kubva paUbuntu 18.04, nerutsigiro kusvika Kubvumbi 2023.
XFCE 4.14 yakavakirwa desktop.
New tarisa desktop, inosanganisira nyowani nyowani uye mavara matsva. Kune zvakare akareruka uye erima madingindira.
Otomatiki theme theme, iyo inoshanduka kubva pachiedza kuenda kurima tema zvichienderana nenguva yezuva Uku ndiko kumwe kutsaudzira pane sarudzo senge iyo Husiku Ruvara inowanikwa muUbuntu.
Tsigiro yePlppak uye Snap mushure mekuiswa zero. Tsigiro yePapapapakeji yaive yatovepo kubvira Zorin 12, asi Flatpak yakawedzerwa iyo inotibvumidza isu kuti tiwedzere zvinyorwa seFlathub.
Yekuzivisa chiratidzo uye Usakanganise modhi.
Mazhinji ekuvandudza emukati uye maitiro ekushandisa.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha pasi Zorin OS 15 Lite kubva Iyi link. Is inowanikwa muma 64-bit uye 32-bit shanduroIzvo zvine musoro nekuti, pakati pezvimwe zvinhu, Zorin inobata mashandiro ayo seayo anogona kuunza akura makomputa achimhanya aine asingasviki 2GB ye RAM kuhupenyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin OS 15 Lite inouya nerutsigiro rweSnap uye Flatpak mushure mekuiswa zero, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Ini ndinoda Zorin os. Iyo ndiyo yangu huru yekushandisa system, zvese zvebasa uye zvekushandisa pamba. Iko kusununguka kwekushandisa, kwakafanana neWindows, kunoita kuti igovanwe zvakafanira kune vatsva kuGnu Linux.
carlos vasquez akadaro
Ini ndinoda ino system ini ndakaiwana ichangopfuura (sekudemba kwandinoita) mune yayo 12.4 lite vhezheni ndichaisa iyo 15 lite… .. Hwaive hupenyu hutsva hweangu mini laptop ine atomu n455, gma 3150, 2gb uye 512gb hdd ….
Inoenda zvakanyanya kuyerera kupfuura windows 7 ... zvirokwazvo iine mbiri mbiri uye hapana chekuona, yakakwana kurodha bitorrent
Pindura Carlos vasquez
John Bosco Molina akadaro
Yakanaka imwe nzira yeWindows 7, kana ichishanda senge Ubuntu distros, ini ndichaiisa zvechokwadi. Muchiitiko changu ndine Toshiba Satellite mune yakanaka kwazvo mamiriro ekuchengetedza, kunyanya, ini handina chandinopesana neiyo nyowani, kana proprietary software, munhu wese ane yake, asi mune kesi yeLinux chikomborero kuva nevanhu ivo Ivo funga nezvevamwe, uye mimwe michina "yechinyakare" yakasimba uye yakasimba, kwete mukhibhodi chete asi munzvimbo dzayo zhinji, handioni kuti nei vachifanira 'kuraswa kana vachigona' kumutsiridzwa '. makomputa mazhinji anotakurika, matsva, ane simba uye panguva imwe chete akareruka, kana iwe ukaashandisa zvakanyanya zvinoita sekunge vari kuzobvisa zvombo. Izvo hazvigoneke kuve nezvose muhupenyu ...
Pindura Juan Bosco Molina
Ndakaedza Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint, Ubuntu MATE, pama laptops ekare uye hapana kugoverwa kwakandigutsa, Xubuntu zvishoma, ndiyo yakandipa zvikanganiso zvishoma, asi zvainetsa kushandisa kune vanhu vasina ziva kuti yemahara software iriko, kudzamara ndafunga kumutsiridza uye inenge system yese ikakundikana, ndipo pandakachinjira kuUbuntu, pakupedzisira zvakandipawo zvikanganiso uye sezvo yangu WiFi usb kanyanga yakafira, kune yangu aifarira desktop desktop, ini ndinoshandisa iyo laptop semunhu anodzokorora chete uye seyechipiri system yekutsvaga chimwe chinhu uye kwete kudzima chandinofarira (kutamba).
Ndakaedza Zorin OS 15 Lite uye ikozvino ndave ndakaisirwa pamakomputa mana, maviri ekare malaptop, desktop ine 4gb mugondohwe ddr2, uye chandinofarira kwandave nebhutsu mbiri, pamwe neWindows 3, asi ndakarega kushandisa Windows, kunyangwe Ini ndakaiisa pane SSD, ini ndiri kuzongoishandisa kutamba, asi nguva pfupi yadarika ndinotamba zvakanyanya pa android. Ini ndinofunga kuti Zorin ndiyo sisitimu iyo inondikurudzira kuti ndisiye Windows zvirinani narinhi, ini ndinokurudzira zvikuru iyo lite vhezheni, inova iyo yandiri kushandisa.
Chimwe chinhu chiri chokwadi ndechekuti ini ndinoti kuenda nekusingaperi kune anoshanda chaizvo Windows 7, asi pasina rutsigiro ini handidi kuve nemakakatanwa andaive nawo panguva iyoyo neane simba kwazvo Windows XP. Mune ruzivo rwangu zvakanakisa zveWindows zvekushandisa pamba: 2000, XP uye 7, zvimwe zvese zvaipesana chaizvo nehurongwa uye software; pane linux ndaifarira Kubuntu, asi Linux zvechokwadi yakandikurudzira neZorin.
Ndiri kuyedza iyo Zorin 15, uye sezvo ini ndatova nematambudziko neiyo wifi, sezviri pachena haina kuona kiredhiti kadhi uye ini handizive kuimisa nemawoko, ndatevera mamwe mafundo uye kunyangwe izvozvi handina kukwanisa ita kuti ishande. Ini ndinosiya yangu email kuitira kana chero munhu achigona kundibatsira wi.javier.ro.na@gmail.com Ini ndinoshandisa Lanix Neuron Al v8 laptop
William, pamwe zvinokubatsira iwe kuti uise network kadhi kuburikidza neUSB, ini ndinoshandisa imwe uye inoshanda zvakanyanya, hauwanzoshandisa ese usb chiteshi uye aya makadhi madiki kwazvo. Iwo gumi kwandiri….
Android-x86 yakazivisa yekutanga preview vhezheni ye Android 9